Tararunako - Wikipedia
Tararunako (ku Chingezi: calligraphy) Tsararunako kana Bharaunake usezi hwe kunyora. Izwi iri rinobva mumutauro weChigiriki uye rinoreva "kunyora kwakanaka". Kumadokero, uku kwaive kufarira mukushongedza mazwi pane peji. Kutararunako munyika dzekuMadokero yaigara ichionekwa seusezi hudiki.
Tararunako rwe Chiarabhu.
KuMabvazuva kweEzhiya Kutararunako kwaive "usezi hwakaremekedzwa" fomu pamberi peDhinasti ye Tang. Inoramba iine chimiro chepamusoro pakati pezvigadzirwa. Iri kuitwa nhasi nevanhu vakawanda kusanganisira vana vechikoro.
Mazwi ekuti Kutsara (to draw) kana kutara (to draw kana to line out) akasanganiswa neshoko rekuti 'runako' "beauty" anosika mazwi ekuti tsararunako kana tararunako. Zvichireva kuti "to draw beauty".
Kubharaunake kana kubharamanake mazwi anoreva zvimwe futi, "kunyora zvakanaka" iro shoko rekuti bhara rinoreva zve kuti kunyora.
Zvituru zvikuru zvekutararunako ikaramu uye bhurasho. Zvinyoreso zvetararunako zvinonyora ne manibhi anogona kunge akati sandara, akatenderera, kana akanongedza. Nokuda kwezvimwe zvekushongedza, makaramu kana mabhurasho e chisa (kana stiri) ane manibhu-mahobho esimbi-anogona kushandiswa. Nekudaro, mabasa akagadzirwawo ne zvinoyreso senge mamaka ne bhiro, kunyangwe mabasa aya asingashandisi mitsetse ine angled. Kune mamwe masitaera ekutararunako, senge Keruro ye Goti, anoda karamu ye stabhu nibhu.
Makaramu anowanzo shandiswa ndeaya:
Karamu ye tseera
Bhurasho re ingi
Retrieved from "https://sn.wikipedia.org/w/index.php?title=Tararunako&oldid=93127"
Last edited on 2 Kubvumbi 2022, at 02:28
This page was last edited on 2 Kubvumbi 2022, at 02:28.